कक्षा ५ मा पढ्ने बालकले आफ्नै महिला प्रिन्सिपल’सँग माया बसेर लेखे यस्तो प्रेम’पत्र, जस्ले पाए यस्तो सजाए ! – Online Saptarangi
कक्षा ५ मा पढ्ने बालकले आफ्नै महिला प्रिन्सिपल’सँग माया बसेर लेखे यस्तो प्रेम’पत्र, जस्ले पाए यस्तो सजाए !
October 16, 2020 October 16, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on कक्षा ५ मा पढ्ने बालकले आफ्नै महिला प्रिन्सिपल’सँग माया बसेर लेखे यस्तो प्रेम’पत्र, जस्ले पाए यस्तो सजाए !
भारतमा हालै एउटा तस्बिर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । विद्यालय पोशाकमा रहेका दुई बालकको हात खुट्टा बाँधे,र राखिएको अवस्थाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइर’ल भएको हो । सो तस्बिरको वास्तविकता थाहा पाउने ब्यक्ति भने पहिला निकै आश्चर्यमा पर्नेछ । उनीहरुलाई विद्यालयको प्रिन्सिपलको निर्देशनमा त्यसरी हातखुट्टा बाँधेर राखिएको हो ।
October 5, 2020 October 5, 2020 Prakash Waiba